Elon Musk vs. Vitalik Buterin; DOGE ၏မဖြစ်နိုင်သည့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်နိုင်မှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားသည်
> Buterin ကသူသည် DOGE ကိုချစ်ကြောင်း၊ သူသည် cryptocurrency ၏တစည်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Ethereum ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Vitalik Buterin က Lex Fridman ရဲ့ podcast အတွင်းမှာ cryptocurrency အပေါ် DOGE နဲ့ cryptocurrency အပေါ် Elon Musk ရဲ့ရပ်တည်ချက်အကြောင်းမကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု
Musk ၏ DOGE နှင့်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအကြောင်းတွစ်တာများစွာကိုဆွေးနွေးထားသည်။ Fridman က Musk ၏
ကိုကိုးကားပြီး၊ "အကောင်းဆုံးကတော့ Doge ကပိတ်ရက်အချိန်ကို ၁၀ ဆတိုးမြှင့်သည်။ လုပ်ကွက်အရွယ်အစားကို ၁၀x တိုးစေတယ်။ အခကြေးငွေကိုလည်း 100X လျှော့ချသည်။ " ထို့နောက်သူသည်လက်ကိုအနိုင်ယူလိုက်သည်။ "
Vitalik Buterin က DOGE ၏အရွယ်အစားကိုရှင်းပြနိုင်သည်။
DOGE ၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းကိုပြောခြင်း၊ Musk သည် DOGE ကိုလိုချင်သောတိုးမြှင့်နိုင်မှုသည်ဗဟိုမှဗဟိုချုပ်ကိုင်ခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။blockchain ology ။
ဒါ့အပြင်ButereinကEthereumသို့လုံခြုံသောDOGEတံတားတစ်ခုထားရှိခြင်းသည်"အံ့သြဖွယ်" ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးသူသည် Musk ၏ DOGE သို့ပြောင်းခြင်းမပြုမီ Bitcoin ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်လည်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Musk သည် Bitcoin ၏ထောက်ခံသူဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် Bitcoin သည် hashtag ကိုသူ၏တွစ်တာအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်တက်စလာသည် EV ကုမ္ပဏီမှ Bitcoin ကိုဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံဖြင့် ၀ ယ်ယူခဲ့ကြောင်း Securities and Exchange Commission နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Bitcoin ကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအနေဖြင့်စတင်လက်ခံလိမ့်မည်ဟုမော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် Musk က Tesla သည် BTC ကိုလက်မခံဟုကြေငြာခဲ့ပြီး၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ။ Musk သည် DOGE အတွက်ငြင်းခုံခဲ့ပြီး Fridman က Tesla သည် cryptocurrency ကိုရယူရန်စဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ EX သည် crypto အာကာသတွင် ETH ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်စဉ်းစားလိမ့်မည်ဟု Programmer ကယူဆပါသလားဟုအင်တာဗျူးက Buterin ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ Buterin သည် Tesla နှင့် SpaceX ကိုတစ်နေ့ ETH ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ Fridman နောက်ထပ် Cardano နှင့် Ethereum စီမံကိန်းများအကြားတူညီမှုများအကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ Cardano ကို Ethereum ကိုတည်ထောင်သူ Charles Hoskinson က ဦး ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် Ethereum ကွန်ယက်ကဲ့သို့သောအစုရှယ်ယာသဘောတူညီမှု၏အားသာချက်ကိုရယူသည်။ အင်တာဗျူးသူက Buterin က Cardano အားပြိုင်ဘက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထပ်တိုးနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သလားမေးသည်။ မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် Forbes သည်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး crypto ဘီလျံနာသူအဖြစ် Buterin ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုကြေငြာချက်အရအသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ပရိုဂရမ်မာသည်ဒေါ်လာ ၃.၂၇၈ ဖြင့် ETH တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁.၀၉ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ETH ၃၃၃,၅၂၀ ရှိခဲ့သည်။
CybermatinéeSécurité Occitanie 2021: မီးမောင်းထိုးပြများကိုအာရုံစိုက်ပါ
2021-06-14 18:09:44 | မင်္ဂလာပါ...
Le Monde Informatique ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကနွေရာသီမတိုင်မီCybermatinéeSécurité 2021 သံသရာဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ယနေ့ Occitanie ဇာတ်စင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအထူးသဖြင့် Airbus OneWeb မှ Toeouse မြို့ခံGrégory Bouet RSSI ၏တုန့်ပြန်ချက်နှင့်အတူ Satellites, Actia မှSébastien Rabaud RSSI နှင့် Cahors Group ...
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူး Thai sec သည်စကားပြောခြင်း၊ ပရိသတ်များနှင့်လဲလှယ်ခြင်းတိုကင်များအပြင် nfts များကိုတားမြစ်သည်
2021-06-14 06:29:58 | ဘလောက်...
ထိုင်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးနှင့်လဲလှယ်ရေးကော်မရှင် (SEC) မှ cryptocurrency tokens အမျိုးအစားများအနက်မှများစွာသောအားဖြင့် crypto တူရိယာများရောင်းဝယ်မှုကိုတားဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှုအားပိတ်ပင်ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ မည်သည့်စျေးနှုန်းများကိုလူမှုရေးစိတ်ထားများကအဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုထိုင်း၏ SEC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သ...
Banco အလယ်ပိုင်းအာဂျင်တီးနားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု nueve empresas usint ilegal က de criptomonedas
2021-06-14 06:28:44 | ဘလောက်...
အယ်လ် Banco ဗဟို de la Repúblicaအာဂျင်တီးနား (BCRA) သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်အလယ်အလတ်တန်းစားရန်ပုံငွေမတည်ရှိသည့်အလယ်အလတ်ငွေကြေးရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ပါ။ BCRA တွင်မည်သည့်identificóalas compañías bajo investigaciónကိုဖတ်ပါ။ က...
Crypto ကိုတရားမ ၀ င်အသုံးပြုမှုအတွက်အာဂျင်တီးနားသည် FinTech ကုမ္ပဏီ ၉ ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်
2021-06-14 06:27:33 | ဘလောက်...
အာဂျင်တီးနားဗဟိုဘဏ် (BCRA) သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများမှတဆင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုစွပ်စွဲထားသော fintech ကုမ္ပဏီကိုးခုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။ ဤ crypto-asset များသည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်စားသုံးသူချေးငွေများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်အကျိ...
Hut 8 သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက nasdaq စာရင်းမဝင်မီစတော့ရှယ်ယာများကိုဒေါ်လာ ၈၂ သန်း ၀ ယ်ရန်သဘောတူကြသည်
2021-06-14 06:26:21 | ဘလောက်...
လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် Nasdaq ၌အစုရှယ်ယာများစတင်ဝင်ရောက်တော့မည့်ကနေဒါ crypto-သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ Hut 8 သည် Canaccord Genuity သည်အဓိကထောက်ပံ့သူဖြစ်ပြီးဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၈၂ သန်း) ကိုမြှင့်တင်ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီနှင့်ပိုင်ရှင်များအားပေးသောအာမခံပါ ၀ င်သည့်ယူနစ်တစ်ခုစီတွင်အစုရှ...
Yearn ၏ cronje သည်စိန်ခေါ်မှု instadapp အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သည်
2021-06-14 06:25:13 | ဘလောက်...
Instadapp သည် Standard Crypto ဦး ဆောင်သောရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံအပြီးသတ်ပြီး Yearn. Finance ကိုတည်ထောင်သူ Andre Cronje အပါအ ၀ င် crypto investment platform. Instadapp သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္inာရေးတွင်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတစ်ခု (DeFi) ကိုဆောင်ရွက်သည်။ DeFi protocols များနှင့် crypt paym...
တောင်အာဖရိက၏ဘဏ္cryာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် crypto ဖလှယ်မှုကိုစည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုသို့ရောက်စေသည်
2021-06-14 06:24:02 | ဘလောက်...
တောင်အာဖရိကဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးက crypto ကုမ္ပဏီများအားစောင့်ကြည့်ရန်အစီအစဉ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သောကြာနေ့တွင် Intergovernmental FinTech လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (IFWG) နှင့်ဘဏ္releasedာရေးကဏ္ Con အပြုအမူအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (FSCA) မှထုတ်ပြန်သောစာတမ်းတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစတင်စည်းရုံးလိမ...
ဗဟိုဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ကအီတာလျံဆာဗေးဒေါနိုင်ငံတွင် Bitcoin တရားဝင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်
2021-06-14 06:22:53 | ဘလောက်...
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဗဟိုဘဏ်များမှပိုင်ဆိုင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေချရေးဘဏ် (BIS) ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဗဟိုချက်ဖြစ်သည့် Benoit Coeure ကအယ်လ်ဆာဗေးဒေါသည်တရားဝင်ငွေပေးချေမှုအဖြစ် Bitcoin ကိုလက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဆာဗေးဒေါသည်အမှန်တကယ်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော...
Fomo ကုန်သည်များသည် Bitcoin မှပြောင်းသွားသည်နှင့်အမျှ meme စတော့များသည်
2021-06-14 06:20:28 | ဘလောက်...
cryptocurrencies မတည်ငြိမ်သောမေလပြီးနောက်တည်ငြိမ်လာသောအခါလူကြိုက်များသော meme စတော့အိတ်များထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လေ့လာသုံးသပ်သူများကကုန်သည်များသည်စျေးကွက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့ရွေ့လျားသွားသောအခါ၎င်းသည် FOMO ကိုဆုံးရှုံးရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟုခေါ်ကြသည်။ "Crypto မှ Reddit လူအစုအဝေးမှရွေးချယ်ထားသောစတ...
စျေးကွက်ဆိုင်ရာစာအိတ် - ဘေဆယ်လ်မှနောက်ဆုံးထုတ်သတင်းသည်တပတ်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၈၀၀၀ အထိ btc အထိမြင့်တက်စေသည်။ ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်
2021-06-14 06:18:58 | ဘလောက်...
Bitcoin သည်ဥရောပပြင်ပရှိအပြုသဘောဆောင်သည့် cryptocurrency banking သတင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ Bitcoin (BTC) နှင့်အတူ 9:00 p. m. UTC (4:00 p. m. ET) မှာလှည့်ပတ် $ 36.732 အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နှင့်အတူအချို့သောအသံအတိုးအကျယ်, မတည်ငြိမ်မှုနှင့် options များဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအဆိုပါ aether ၏ရောင်ခြည်ကြာသပ...
Solana အခြေပြုအောက်စီဂျင်အဆို့ရှင်များသည်စိန်ခေါ်မှု၏ပထမဆုံး 'အဓိကအကျိုးဆောင်ခြင်း' ဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။
2021-06-14 06:16:10 | ဘလောက်...
Solana blockchain ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောအောက်စီဂျင်သည်ဗဟိုမှခွဲဝေထားသောဘဏ္broာရေးအကျိုးဆောင်ခြင်း (DeFi) ကိုချီကာဂိုအခြေစိုက် Jump Trading အားမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Fried၊ Multicoin Capital နှင့် Genesis Trading (CoinDesk မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအုပ်စု) ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ကုမ္...
ကွေးသောမျက်လုံးသည်ဗားရှင်း ၂ အတွက်စက္ကူဖြူနှင့်ပိုမိုချစ်ပ်များကိုစိန်ခေါ်သည်
2021-06-14 06:14:48 | ဘလောက်...
Stecocoins များအတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း (DEX) ဖြစ်သော Uniswap. Curve နှင့် Curve ပြိုလဲသွားသည်၊ မတည်ငြိမ်သော token pools ကိုဒုတိယဗားရှင်းဆီသို့ရွေ့လျားသွားသည်နှင့်မည်သို့စတင်မည်ကိုပြသသည့် vignette ကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြောင်းလဲနေသောတံစို့ကိုအသုံးပြု။ မတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရေကန်ပေါ်...
စျေးကွက်ဆိုင်ရာစာအိတ် - Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၃၆.၈၀၀၀ ထိရှိသည်
2021-06-14 06:11:42 | ဘလောက်...
Blockchain-based ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းများတရုတ်အတွက် cryptocurrency ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်ဘက်တော်သားကျော်မသေချာမရေရာလှိုင်းသစ်တစ်ခုကြားတွင်တက်, Bitcoin (BTC) 9:00 pm တွင် UTC (16 ဇ ET) မှာ $ 36.227 မှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, ယခင် 24 အတွက် 10.2% ခုန် နာရီ။ Bitcoin ၏ 24 နာရီအကွာအဝေး: $ 32.557 မှ $ 36,890 (Coi...